ရခိုင်အရေး ပူးပေါင်းပါဝင်ရန် အမေရိကန်၊ ဒိန်းမတ်နှင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးတို့ ပြည်ေ?? - Yangon Media Group
လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးအား မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Scot Marciel ၊ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Peter Lysholt Hansen နှင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Andrew Patrick တို့က အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် အဆိုပါဝန်ကြီးရုံး မေခလာခန်းမတွင် လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းအရ ရွေးကောက် တင်မြှောက်ထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ၏ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် တိုးတက်မှုများကို အသိအမှတ်ပြုပါကြောင်း၊ ပြည်သူများ၏အင်အားကို ဖိတ်ခေါ်တည်ထောင်ထားသည့် UEHRD ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာကော်မတီများနှင့် ၄င်းတို့၏ ဆက် စပ်ပတ်သက်နေသောလုပ်ငန်းများ၊ အရှိန်မြှင့်ဆောင်ရွက်နေသော လူသားချင်းစာနာကူညီမှုဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့ပေးရေးကိစ္စရပ်များ၊ UEHRD ၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်များဖြစ်သော လူသားချင်းစာနာ ကူညီထောက်ပံ့မည့်အစီအစဉ်များ၊ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ပူးပေါင်း၍ လုပ်ငန်းတာဝန်အသီးသီးအား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေမှုများ၊ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းနှင့် နေရာဒေသများရွေးချယ်၍ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ စတင်နေမှုများ Diversity Management Forum ကျင်းပ၍ မတူခြားနားမှုများအားနားလည် လက်ခံလာစေရေးချဉ်းကပ်နည်းလမ်းများ၊ ရှာဖွေဖော်ထုတ်မည့် ကိစ္စရပ်များ၊ ဒေါက်တာကိုဖီအာနန်ကော်မရှင် အကြံပြုချက် အကောင်အထည်ဖော်မှုများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ဒေသတွင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး အထောက်အကူဖြစ်စေရန် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းမှ ပညာသင်ဆုများထောက်ပံ့နိုင်ရေးကိစ္စရပ်များကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။